ओलीको उपहार थियो मोदीलाई कर्ता पाइजामा ! – YesKathmandu.com
सोमबार ०४, असार २०७५
ओलीको उपहार थियो मोदीलाई कर्ता पाइजामा !
शनिबार २९, बैशाख २०७५
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रवार कुर्ता पाइजामामा देखिए । ओलीको पहिरनलाई कतिपयले आलोचना पनि गरे । पटनाबाट विशेष विमानमा जनकपुर ओर्लेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पनि पहिरनपनि ओलीको जस्तै देखियो । दुवै प्रधानमन्त्री एउटै पोषाकमा देखिनु संयोग होइन संयोजन हो ।
मोदी नेपाल आउनुभन्दा पहिले जानकी मन्दिरमा लगाउने कपडाका बिषयमा बालुवाटारभित्र छफफल भएको थियो । दुवै प्रधानमन्त्रीले एउटै पहिरन लगाउने निस्कर्ष निस्केपछि भारतीय दूतावाससँग मोदीको साइज मागिएको थियो । भारतीय दूतावासले मोदीको साइज दिएपछि नेपालमै दुई प्रधानमन्त्रीका लागि कुर्ता पाइजामा बनाइएका थिए ।
ओलीले भारतीय समकक्षीलाई कुर्ता पाइजामा पठाएका थिए । ओलीले नेपालबाट पठाएको कर्ता पाइजामा लगाएर भारतबाट जानकी मन्दिरमा आइपुगेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्री एउटै डेसमा देखा परेका थिए । दुवैले जानकी मन्दिरमा पुजा त्यही कुर्ता पाइजामामा गरेका थिए ।
मुक्तिनाथमा मोदीका पाँच रुप, छिरिङ किङ्गा टाउकोमा लगाएर हिडे
सिटौलालाई चुनौती दिंदै वाम गठबन्धनबाट लिङ्देनको उम्मेदवारी,कमल थापा अप्ठ्यारोमा
सरकार र मुस्लिम गठबन्धन बीच आज वार्ता
इटहरीमा चिम्नी पड्किएर मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो, १९ जना घाइते
हिरासतमा रहेका दिक्षित अस्पतालमा भर्ना
साहनीकी छोरीलाई बलात्कार गर्ने धम्की दिएपछि मोडल साहना र सुरजबिरुद्ध मुद्दा लगाउने तयारी
प्रधानमन्त्रीज्यू,शहीद दिवस ‘दशैं पर्व’ हो ?
देउवाको बिजय र खुमबहादुरको उदयले कांग्रेसमा हिन्दुवादीको बाहुल्यता
नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिकमा राष्ट्रिय भेला गर्दै
बाजुराको बुढीगंगा मतदान केन्द्र बन्यो रणमैदान, एमाले र कांग्रेसका मेयर उम्मेद्धारमाथी आक्रमण
सुन तस्करी चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को बयान सुरु
सुरक्षा चुनौती बढ्दा पनि गृहमन्त्री किन तोकिएन ?
अफगानिस्तानद्वारा नेपालसामू १९६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत,नेपालले जवाफी ब्याटिंग गर्दै
कांग्रेसभित्र देउवाकै नेतृत्व स्थापित गर्न भातृ संगठनको विशेष बैठक, केके निर्णय भए ?
मधेसी मोर्चाको रणनीति : सके चुनाव रोक्ने,नभए ठोक्ने
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्पदंश बढ्यो